Tumi a Ɛsɛe Ade—‘Yehowa Yɛ Ɔdɔmmarima’
NÁ WƆAKA Israelfo no ahyem—na wɔaka abotan a wontumi mforo ne ɛpo a wontumi ntwa ntam. Ná Misrifo asraafo, awudifo atirimɔdenfo no taa wɔn so denneennen a na wɔasi wɔn bo sɛ wɔbɛtɔre wɔn ase. * Nanso, Mose hyɛɛ Onyankopɔn nkurɔfo no nkuran sɛ wɔmmpa abaw. Ɔmaa wɔn awerɛhyem sɛ: “[Yehowa, NW] bɛko ama mo.”—Exodus 14:14.
2 Ɛno mpo no, ɛda adi sɛ Mose su frɛɛ Yehowa, na Onyankopɔn gyee so sɛ: “Ɛdɛn na wusu frɛ me? . . . Ma wo poma no so, na teɛ wo nsa ɛpo no so, na bae mu.” (Exodus 14:15, 16) Wo de yɛ nsɛm a efii ase sisii no ho mfonini hwɛ. Yehowa hyɛɛ ne bɔfo bi ntɛm ara, na omununkum dum no kodii wɔn akyi, ebia emu trɛw yɛe sɛ ɔfasu siw Misrifo no kwan a na wɔbɛfa so atow ahyɛ Israelfo so no. (Exodus 14:19, 20; Dwom 105:39) Mose teɛɛ ne nsa. Mframa a ano yɛ den paee ɛpo no mu. Ɛbɛyɛ sɛ nsu no kyenkyenee gyinae sɛ afasu, na ɛpaee kwan a emu trɛw a ɔman mũ no nyinaa betumi afa so!—Exodus 14:21; 15:8.
3 Bere a Farao hyiaa tumi a wɔdaa no adi wɔ saa kwan yi so no, na anka ɛsɛ sɛ ɔma n’asraafo no san wɔn akyi. Mmom, ɔhantanfo Farao kae sɛ wɔntow nhyɛ wɔn so. (Exodus 14:23) Misrifo no de ahopere tiw wɔn sii ɛpo bun no mu, nanso ankyɛ na wɔn ntua no yɛɛ basaa bere a wɔn nteaseɛnam no anan fii ase hunhuanee no. Bere a Israelfo no duu nsu no agya dwoodwoo no, Yehowa hyɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa ɛpo no so, na nsu no nsan mmra Misrifo ne wɔn nteaseɛnam ne wɔn apɔnkɔfo no so.” Nsu a adan afasu no bubui kataa Farao ne ne dɔm no so!—Exodus 14:24-28; Dwom 136:15.
5 Wɔbɔ Onyankopɔn abodin bɛyɛ mpɛn ahasa wɔ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu ne mpɛn abien wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu sɛ ‘asafo Yehowa.’ (1 Samuel 1:11) Sɛ́ Otumfo Pumpuni no, Yehowa di abɔfo dɔm asafo so. (Yosua 5:13-15; 1 Ahene 22:19) Tumi a asafo yi wɔ a wɔde sɛe ade no yɛ nwonwa. (Yesaia 37:36) Ɛnyɛ anigye sɛ yebesusuw nnipa a wɔsɛe wɔn ho. Nanso, ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ Onyankopɔn akodi nte sɛ nnipa akodi a enni nnyinaso no. Ebia asraafo ne amammui akannifo bɛbɔ mmɔden akyerɛ sɛ wɔn ntua wɔ nnyinaso pa. Nanso, anibere ne pɛsɛmenkominya na ɛma nnipa di ako bere nyinaa.
6 Nea ɛne no bɔ abira no, ɛnyɛ nkate a enni nnyinaso na ɛma Yehowa yɛ ade. Deuteronomium 32:4 ka sɛ: “Ɔbotan no, n’adeyɛ yɛ pɛ, na n’akwan nyinaa yɛ trenee; ɔyɛ nokware Nyankopɔn na nkontompo nni no mu; ɔtreneeni ne teefo ne no.” Onyankopɔn Asɛm kasa tia abufuhyew, atirimɔdensɛm, ne basabasayɛ. (Genesis 49:7; Dwom 11:5) Enti Yehowa nyɛ biribi a enni nnyinaso. Ɔntaa mfa ne tumi a ɛsɛe ade no nni dwuma, na ɔde di dwuma bere a ɛno ne ade a ɛfata paa sɛ ɔyɛ. Ɛte sɛ nea ɔnam ne diyifo Hesekiel so kae no: “So ɔpɛ na mepɛ ɔbɔnefo wu? [Yehowa, NW] Nyankopɔn asɛm ni; so ɛnyɛ́ sɛ ɔsan fi ne kwan so na onya nkwa na mepɛ?”—Hesekiel 18:23.
7 Ɛnde, dɛn nti na Yehowa de tumi a ɛsɛe ade no di dwuma? Ansa na yebebua no, ɛsɛ sɛ yɛkae ɔtreneeni Hiob. Satan twaa mpoa sɛ ebia Hiob—nokwarem no, onipa biara—bekura ne mudi mu wɔ sɔhwɛ mu anaa. Yehowa buaa saa mpoatwa no denam ma a ɔmaa Satan sɔɔ Hiob hwɛe no so. Ne saa nti, Hiob yaree, ɔhweree n’ahode, na ɔhweree ne mma. (Hiob 1:1–2:8) Bere a na Hiob nnim nea ɛrekɔ so no ho hwee no, odii mfomso kae sɛ n’amanehunu no yɛ Onyankopɔn asotwe a ɛnteɛ a aba ne so. Obisaa Onyankopɔn nea enti a Wayɛ no ‘ade a ɔne no anya,’ ne ne “tamfo,” no ho asɛm.—Hiob 7:20; 13:24.
8 Aberante bi a ne din de Elihu daa mfomso a ɛwɔ Hiob nsusuwii mu no adi sɛ: “Woka sɛ: Me trenee sen Onyankopɔn de.” (Hiob 35:2) Yiw, nyansa nnim sɛ yebesusuw sɛ yenim biribi sen Onyankopɔn, anaasɛ yebenya adwene sɛ wayɛ ade wɔ ɔkwan a ɛmfata so. Elihu kae sɛ: “Ɛmpare Onyankopɔn sɛ obedi asɛmmɔne, na Otumfoɔ bedi amumɔyɛsɛm.” Akyiri yi, ɔkae sɛ: “Otumfoɔ de, yenhu no, ɔyɛ tumi mu ɔkɛse, na ɔrenkyea atemmu ne trenee a ɛdɔɔso.” (Hiob 34:10; 36:22, 23; 37:23) Yebetumi anya ahotoso sɛ sɛ Onyankopɔn ko a, na ɔwɔ nnyinasosɛm a ɛfata a ɔde yɛ saa. Bere a ɛno wɔ yɛn adwenem no, ma yɛnhwehwɛ nneɛma a enti ɛtɔ mmere bi a asomdwoe Nyankopɔn no dan ɔkofo no mu.—1 Korintofo 14:33.
9 Bere a Mose kamfoo Onyankopɔn sɛ “dɔmmarima” wiei no, ɔkae sɛ: “Hena na ɔte sɛ wo, [Yehowa, NW], wɔ anyame mu? Hena na ɔte sɛ wo, kronkronyɛ mu onuonyamfo.” (Exodus 15:11) Odiyifo Habakuk kyerɛw saa ara sɛ: “Wo a w’aniwa yɛ kronkron a wuntumi nhwɛ bɔne na wuntumi nhwɛ ɔhaw.” (Habakuk 1:13) Ɛwom sɛ Yehowa yɛ ɔdɔ Nyankopɔn, nanso ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ kronkron, ɔpɛ trenee, na obu atɛntrenee nso. Ɛtɔ mmere bi a su a ɛtete saa no hyɛ no ma ɔde ne tumi a ɛsɛe ade no di dwuma. (Yesaia 59:15-19; Luka 18:7) Enti sɛ Onyankopɔn di ako a, ɔnsɛe ne kronkronyɛ no. Mmom no, esiane sɛ ɔyɛ kronkron nti na odi ako.—Exodus 39:30.
10. (a) Bere bɛn ne ɔkwan bɛn so na ɛho behiae sɛ Onyankopɔn di ako nea edi kan? (b) Ɔkwan bɛn so nkutoo na wɔnam betumi ayi ɔtan a wɔkaa ho asɛm siei wɔ Genesis 3:15 no afi hɔ, na mfaso ahorow bɛn na adesamma atreneefo benya?
10 Susuw tebea a ɛsɔree bere a nnipa baanu a wodi kan, Adam ne Hawa, tew atua tiaa Onyankopɔn no ho hwɛ. (Genesis 3:1-6) Sɛ Yehowa maa wɔn amumɔyɛ no ho kwan a, anka ɔsɛee n’akasa gyinabea sɛ Amansan Hene no. Sɛ́ trenee Nyankopɔn no, na ɛsɛ sɛ obu wɔn kumfɔ. (Romafo 6:23) Wɔ Bible mu nkɔmhyɛ a edi kan mu no, ɔka siei sɛ ɔtan bɛda n’ankasa asomfo ne “ɔwɔ” no, Satan, akyidifo ntam. (Adiyisɛm 12:9; Genesis 3:15) Awiei koraa no, Satan a wɔbɛpɛtɛw no nkutoo so na wɔnam betumi ayi ɔtan yi afi hɔ. (Romafo 16:20) Nanso, saa atemmu no de nhyira pii bɛbrɛ adesamma atreneefo, na wɔayi Satan nkɛntɛnso afi asase so, na abɔ kwan ama wiase nyinaa paradise aba. (Mateo 19:28) Enkosi saa bere no, wɔn a wɔagyina Satan afã no bɛkɔ so ayɛ asiane ama Onyankopɔn nkurɔfo wɔ honam fam ne honhom fam yiyedi mu. Ɛtɔ mmere bi a na ɛsɛ sɛ Yehowa de ne ho gye nsɛm mu.
11 Ne ho a ɔde gye nsɛm mu saa no ho nhwɛso ne Noa bere so Nsuyiri no. Genesis 6:11, 12 ka sɛ: “Na asase asɛe wɔ Onyankopɔn anim, na anuɔden ahyɛ asase so ma. Na Onyankopɔn huu asase, na hwɛ, asɛe, efisɛ ɔhonam nyinaa asɛe wɔn kwan wɔ asase so.” So na Onyankopɔn bɛma abɔnefo asɛe abrabɔ pa kakra a na aka wɔ asase so no koraa? Dabi. Yehowa tee nka sɛ ɛsɛ sɛ ɔde wiase nyinaa nsuyiri ba beyi basabasayɛfo ne ɔbrasɛefo fi asase so.
12 Saa ara na atemmu a Onyankopɔn de baa Kanaanfo so no te. Yehowa daa no adi sɛ Abraham mu na “aseni” bi a asaase so mmusuakuw nyinaa bɛfa ne so anya nhyira befi aba. Nea ɛne saa atirimpɔw no hyia no, Onyankopɔn hyɛe sɛ ɔde Kanaan asase, asase a na nkurɔfo a wɔfrɛ wɔn Amorifo te so no bɛma Abraham asefo. Ɔkwan bɛn so na na Onyankopɔn bedi bem wɔ tu a na obetu saa nkurɔfo yi afi wɔn asase so no ho? Yehowa ka siei sɛ na tu a wobetu wɔn no bɛba bɛyɛ mfirihyia 400 akyi—kosi sɛ “Amorifo amumɔyɛ” ‘bewie du.’ * (Genesis 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) Saa bere no mu no, Amorifo no bra sɛe kɔɔ akyiri. Kanaan bɛyɛɛ asase a abosonsom, mogyahwiegu, ne nna mu ɔbrasɛe ahyɛ so ma. (Exodus 23:24; 34:12, 13; Numeri 33:52) Asase no sotefo kunkum mmofra mpo wɔ ogya mu de bɔɔ afɔre. So na Onyankopɔn a ɔyɛ kronkron no bɛma ne nkurɔfo ahu abɔnefosɛm a ɛte saa? Dabi! Ɔkae sɛ: “Asase no so agu fi, enti na meretua ɛso amumɔyɛ no so ka, na asase no afe ɛsotefo no.” (Leviticus 18:21-25) Nanso, Yehowa ankunkum nkurɔfo no mu nnipa pa amfra abɔnefo no. Wɔansɛe Kanaanfo a na wɔpɛ nkwa te sɛ Rahab ne Gibeonfo no.—Yosua 6:25; 9:3-27.
13 Esiane sɛ Yehowa yɛ kronkron nti, ne din yɛ kronkron. (Leviticus 22:32) Yesu kyerɛɛ n’asuafo sɛ wɔmmɔ mpae sɛ: “Wo din ho ntew.” (Mateo 6:9) Eden atuatew no guu Onyankopɔn din ho fĩ, na ɛmaa asɛm baa Onyankopɔn dibea ne ɔkwan a ɔfa so di tumi ho. Ná Yehowa ntumi mmu n’ani ngu ntwiri ne atuatew a ɛte saa so da. Ná ɛsɛ sɛ ɔtew ne din a wɔahura ho no ho.—Yesaia 48:11.
14 Susuw Israelfo no ho bio. Bere tenten a na wɔyɛ nkoa wɔ Misraim no, na ɛte sɛ nea bɔ a Onyankopɔn hyɛɛ Abraham sɛ N’asefo so na asase so mmusuakuw nyinaa bɛfa anya nhyira no remma mu. Nanso, Yehowa nam gye a ogyee wɔn na ɔhyehyɛɛ wɔn sɛ ɔman no so yii ahohorabɔ fii ne din so. Enti, odiyifo Daniel kaa eyi ho asɛm wɔ mpaebɔ mu sɛ: “[Yehowa, NW] yɛn Nyankopɔn a wode nsa a ɛyɛ den yii wo man fii Misraim asase so de agye din.”—Daniel 9:15.
15 Nea ɛyɛ nwonwa no, Daniel bɔɔ saa mpae yi wɔ bere a na Yudafo no hia sɛ Yehowa yɛ biribi bio esiane ne din nti no. Saa bere yi na Yudafo asoɔdenfo no wɔ nnommumfa mu wɔ Babilon. Na wɔn ankasa ahenkurow, Yerusalem, adan amamfõ. Ná Daniel nim sɛ Yudafo no a wɔbɛsan ama wɔakɔ wɔn kurom no bɛtew Yehowa din ho. Enti, Daniel bɔɔ mpae sɛ: ‘Yehowa, fafiri, Yehowa, yɛ aso na yɛ! Ntwentwɛn wo nan ase, ma ensiane wo, me Nyankopɔn ara nti, na wo din na wɔabɔ, wo kurow ne wo man so.’—Daniel 9:18, 19.
16 So hia a na ɛho hia Yehowa sɛ ɔbɛko ama ne din no kyerɛ sɛ na onni tema, na na ɔyɛ ɔhopɛfo? Dabi, efisɛ ɔnam ade a ɔyɛ maa ɛne ne kronkronyɛ ne atɛntrenee a ɔpɛ hyiae no so bɔɔ ne nkurɔfo ho ban. Fa Genesis ti 14 sɛ nhwɛso. Ɛhɔ na yɛkenkan ahemfo baanan a wotuu sa a wɔfaa Abraham wɔfase Lot, ne n’abusua nnommum no ho asɛm. Ɛdenam Onyankopɔn mmoa so no, Abraham dii asraafo dɔm a wɔn ho yɛ den koraa no so nkonim ma ɛyɛɛ nwonwa! Ebetumi aba sɛ nkonim yi ho asɛm no ne nea edi kan a wɔyɛɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ ‘Yehowa akodi nhoma no mu,’ na ɛda adi sɛ na ɛno nso yɛ nhoma a wɔkyerɛw akodi bi a wɔanyɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Bible mu no ho nsɛm wom. (Numeri 21:14) Na nkonim pii bedidi so aba.
17 Aka kakra ma Israelfo adu Kanaan asase no so no, Mose maa wɔn awerɛhyem sɛ: “[Yehowa, NW] mo Nyankopɔn a odi mo anim no, ɔno na ɔbɛko ama mo, sɛnea ɔyɛ maa mo Misraim wɔ mo anim no ara.” (Deuteronomium 1:30; 20:1) Nokwarem no, Yehowa ko maa ne nkurɔfo fi Mose dedifo, Yosua so, toaa so kɔɔ Atemmufo no bere so ne Yuda ahemfo anokwafo no nniso mu, na ɔma wodii wɔn atamfo so nkonim ahorow a ɛyɛ nwonwa.—Yosua 10:1-14; Atemmufo 4:12-17; 2 Samuel 5:17-21.
18. (a) Dɛn nti na yebetumi de aseda ama sɛ Yehowa nsakrae? (b) Sɛ ɔtan a wɔaka ho asɛm wɔ Genesis 3:15 no du ne mpɔmpɔn so a, dɛn na ebesi?
18 Yehowa nsakrae; na saa ara nso na n’atirimpɔw a ɛne sɛ ɔbɛma okyinnsoromma yi ayɛ paradise a asomdwoe wom no nsakrae. (Genesis 1:27, 28) Onyankopɔn da so kyi abɔnefosɛm. Bere koro no ara, ɔdɔ ne nkurɔfo yiye, na obedi ama wɔn nnansa yi ara. (Dwom 11:7) Nokwarem no, ɔtan a wɔkaa ho asɛm wɔ Genesis 3:15 no rebedu ne mpɔmpɔn so a ɛyɛ nwonwa na basabasayɛ wom nnansa yi ara. Nea ɛbɛyɛ na Yehowa atew ne din ho na wabɔ ne nkurɔfo ho ban no, ɔbɛda ne ho adi bio sɛ “dɔmmarima”!—Sakaria 14:3; Adiyisɛm 16:14, 16.
19 Susuw mfatoho bi ho hwɛ: Fa no sɛ aboa bɔne bi atow ahyɛ ɔbarima bi abusua so, ɛnna ɔbarima no kɔboa kum aboa bɔne no. So wobɛhwɛ kwan sɛ adeyɛ yi bɛma ne yere ne ne mma atwe wɔn ho afi ne ho? Dabida, wobɛhwɛ kwan sɛ ayamye mu a ofi daa ɔdɔ adi kyerɛɛ wɔn no bɛka wɔn koma. Saa ara na ɛnsɛ sɛ dwuma a Onyankopɔn de tumi a ɛsɛe ade di no ma yɛtwe yɛn ho fi ne ho. Ɛsɛ sɛ ɔpɛ mu a ofi ko bɔ yɛn ho ban no ma ɔdɔ a yɛwɔ ma no no mu yɛ den. Ɛsɛ sɛ obu a yɛwɔ ma ne tumi a enni ano no nso mu yɛ den. Enti, yebetumi de ‘fɛre ne ahodaso asom Onyankopɔn sɛnea ɛsɔ n’ani.’—Hebrifo 12:28.
20 Nokwarem no, ɛdefa Onyankopɔn akodi ho no, ɛnyɛ ako no mu biara na Bible no de ho nkyerɛkyerɛmu nyinaa a ɛfa nea enti a Yehowa dii ho no ma. Nanso yɛn adwene betumi asi yɛn pi wɔ eyi ho bere nyinaa: Yehowa mfa tumi a ɛsɛe ade nni dwuma wɔ ɔkwan a ɛnteɛ, enni nnyinaso, na atirimɔden wom so da. Mpɛn pii no, susuw a yebesusuw Bible mu kyerɛwtohɔ anaa nsɛm bi a ɛfa asɛm no ho ho no betumi aboa yɛn ma yɛahu nneɛma ani so yiye. (Mmebusɛm 18:13) Sɛ yɛannya ɛho nsɛm nyinaa mpo a, Yehowa ho nsɛm pii a yebesua ne ne su ahorow a ɛsom bo ho a yebesusuw no betumi aboa yɛn ma yɛadi adwenem naayɛ biara a ɛbɛsɔre so. Sɛ yɛyɛ eyi a, yebehu sɛ yɛwɔ nneɛma pii a yebegyina so anya yɛn Nyankopɔn Yehowa mu ahotoso.—Hiob 34:12.
21 Ɛwom sɛ ɛtɔ da bi a, Yehowa yɛ ‘ɔdɔmmarima,’ nanso eyi nkyerɛ sɛ ɔko ho nsɛm ahyɛ ne koma ma. Wɔ Hesekiel anisoadehu a ɛfa ɔsoro teaseɛnam ho mu no, wɔyɛɛ Yehowa ho mfonini sɛ wasiesie ne ho a ɔrekɔko atia n’atamfo. Nanso, Hesekiel hui sɛ nyankontɔn—asomdwoe ho sɛnkyerɛnne—atwa Onyankopɔn ho ahyia. (Genesis 9:13; Hesekiel 1:28; Adiyisɛm 4:3) Ɛda adi pefee sɛ, Yehowa dwo na ɔpɛ asomdwoe. Ɔsomafo Yohane kyerɛwee sɛ: “Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yohane 4:8) Yehowa su ahorow no nyinaa kari pɛ. Ɛnde, hwɛ hokwan a yɛanya sɛ yebetumi abɛn Onyankopɔn a ɔwɔ dɔ na ɔwɔ tumi a ɛte saa no!
^ nky. 1 Sɛnea Yudani abakɔsɛm kyerɛwfo Josephus kyerɛ no, “nteaseɛnam 600, apɔnkɔsotefo 50,000 ne anammɔnmufo a wɔdɔɔso yiye a wɔn dodow bedu 200,000 na na wɔtaa” Hebrifo no.—Jewish Antiquities,II, 324 [xv, 3].
^ nky. 12 Ɛda adi sɛ, asɛm “Amorifo” a wɔde di dwuma wɔ ha no fa Kanaanfo nyinaa ho.—Deuteronomium 1:6-8, 19-21, 27; Yosua 24:15, 18.
2 Ahene 6:8-17 Ɔkwan bɛn so na dwuma a Onyankopɔn di sɛ ‘asafo Yehowa’ no betumi ahyɛ yɛn den wɔ ahohia bere mu?
Hesekiel 33:10-20 Ansa na Yehowa de tumi a ɛsɛe ade bedi dwuma no, hokwan bɛn na ofi mmɔborohunu mu de ma wɔn a wobu ne mmara so no?
2 Tesalonikafo 1:6-10 Ɔkwan bɛn so na abɔnefo sɛe a ɛreba no bɛma Onyankopɔn asomfo anokwafo ho atɔ wɔn?
2 Petro 2:4-13 Dɛn na ɛma Yehowa de tumi a ɛsɛe ade no di dwuma, na asuade ahorow bɛn na adesamma nyinaa nya fi mu?